Ungasinceda njani isibini ukuba silawule iimvakalelo zaso | IBezzia
UMaria Jose Roldan | | Psicología
Ngamnye kufuneka abe noxanduva lokukwazi ukulawula iimvakalelo zabo kwaye ubabonise indlela abavakalelwa ngayo. Kwimeko yokuba nobudlelwane, umntu omthandayo kufuneka abe namandla ngokwaneleyo okulawula ezi mvakalelo kwaye omnye umntu unokukunceda ukuba ubufezekise. Isibini sakhiwe ukuze sakhe ubudlelwane obonwabileyo kangangoko kunokwenzeka.
Phambi kokufika kweengxaki, bobabini abantu kufuneka baxhasane ukuqinisekisa ukuba iimvakalelo ezahlukeneyo ziyanceda ukufezekisa impilo-ntle ethile phakathi kwesi sibini. Kwinqaku elilandelayo sikubonisa indlela yokunceda isibini ukuba silawule kwaye silawule iimvakalelo ezahlukeneyo.
Yintoni omele uyenze ukunceda iqabane lakho ukulawula iimvakalelo
Kuya kufuneka uqale ngokubonisa ukuba kwisibini, into oziva ngayo inokuphela ichaphazela omnye umntu. Kungenxa yoko xa kunokwenzeka ukuba elinye lala maqela lizive linciphile, lingakhathali okanye lilusizi, elinye kufuneka liqiniseke ngakumbi ukufikelela kwiziphumo ezilungileyo. Kungale ndlela kuphela apho ukuzinza okuthile kunye nokulinganisela kunokufezekiswa kubudlelwane. Nantsi into ekufuneka uyenzile ukunceda iqabane lakho lilawule iimvakalelo zabo:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukubonisa iqabane lakho ukuba unothando kangakanani kwaye ubenze bazive ukuba uyinkxaso enkulu kuye ngamaxesha anzima okanye anzima. Ukuziva ngamaxesha onke ukuba umlingane wakho usondele, Iya kukuvumela ukuba ujonge ngcono iimvakalelo ezahlukeneyo onokuba nazo kwaye abaphumi kulawulo nazo zonke izinto ezimbi ezinokuthi zithethe ngekamva elihle lobudlelwane.
Kuya kufuneka icaciswe into yokuba ukubonisa yonke inkxaso kulowo umthandayo akumkhululi ekufundeni ukulawula iimvakalelo zakhe. Ngamnye kufuneka abe noxanduva kwiimvakalelo zakhe kwaye anganikezeli kolawulo komnye umntu. Ukuba elinye lamalungu esi sibini alinankathalo kwaye lilusizi, omnye umntu akufuneki asokole. Ekuphela kwento onokuyenza kukunceda iqabane lakho loyise le ntlungu ukuze azive engcono. Ukubonisa yonke inkxaso enokubakho kubalulekile xa isibini sisazi indlela yokuhambisa impilo yabo yeemvakalelo ngcono.
Unxibelelwano kunye nencoko yababini ibalulekile kwaye ibalulekile kulo naluphi na ulwalamano. Kungenxa yoko le nto kungaze kube buhlungu ukuhlala phantsi ubuze into oyifunayo ukuze ube ngcono ngokwasemoyeni. Ngamaxesha amaninzi, ukunqongophala konxibelelwano kubangela ukungaqondani okuninzi okuyenza mandundu imeko.
Ekugqibeleni, umntu ngamnye kufuneka afunde ukulawula nokulawula iimvakalelo ezahlukeneyo. Kwimeko yesi sibini, Umntu ophilileyo engqondweni kufuneka abe noxanduva lokuxhasa lowo uziva kakubi. Akukho meko kufuneka wenze lo msebenzi ungene endaweni yakhe, kuba wena ngokwakho kufuneka ukhule ngokwaneleyo ukuze ulawule iimvakalelo zakho okanye iimvakalelo zakho. Ukuba omabini amalungu esi sibini ayayazi indlela yokulawula ngokugqibeleleyo imeko yeemvakalelo, ubudlelwane buya kuba ngolungeleleneyo kwaye impilo-ntle iya koyisa ngaphezulu kwayo nayiphi na ingxaki enokuthi ivele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Ungasinceda njani esi sibini silawule iimvakalelo zaso
I-H & M yokuqubha ongaphoswa yiyo
Iimpahla ezimnyama zasehlotyeni ezili-9 zemihla ngemihla